Xasan shiikh” Dalkaan 21 sano ayuu kaligi talis haystay dhibkiisiina wali lagama soo kabsan haddana xoog iyo gacan bira kuwa ku goodinaya ayaa raba inay nugu celshaan. – Soomaali 24 Media Network
Xasan shiikh” Dalkaan 21 sano ayuu kaligi talis haystay dhibkiisiina wali lagama soo kabsan haddana xoog iyo gacan bira kuwa ku goodinaya ayaa raba inay nugu celshaan.
Xasan shiikh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ka hadlay munaasibadda daah furka xisbiga Himilo qaran oo magaalada muqdisho lugu qabtay maantay, ayaa si kulul uga jawaabay hadalladii madaxweyne Farmaajo iyo raysulwasaare Khayrre oo ahaa gacan bira ayaan ku qabanaynaa dadka rabshadaha wada iyo xilligii mucaaradka laga cabsan jiray waa lasoo dhaafay.
Xasan shiikh ayaa uga mahadceliyey madaxweynihii asaga ka horreeyay shiikh shariif oo suura galiyey inay 22 sano ka dib doorasho ka dhacdo dalka gudihiisa.
sidoo kale wuxuu sheegay inuu asaguna isla waddadaas maray oo uu doorasho ku qabtay magaalada muqdisho xilkana uu ku wareejiyay madaxweyne farmaajo lagana rabo inuu dhaqankaas raaco oo uu doorasho xora ku qabto xilligii loogu talagalay.
wuxuu sheegay erayada xaraar oo kasoo baxaya madaxda qaranka inay yihiin madax geed la dhac macaaradka dhaliilaya wax kasta oo dastuurka kasoo hor jeedaana inaysan ahayn qaran dumis ee ay yihiin qaran dhis afkaaraha kala duwanna loo baahan yahay.
wuxuu yiri hoggaamiye xoog adeegsada dalkaani uma baahna, shacab gacan bira lugu qabto, cabburin siyaasadeed, iyo hanjabaad waa waxa halkaan na dhigay dhibaatadaan ka dhaxalnayna aan wali la daalaa dhacayno ee dalkan yaan dib loo celin.
Previous Sheekh Shariif “ Waxaa faraha baxay Amnigii dalka, Kamana aamusi karno arrimaha qaar”
Next Hey’adaha amniga Soomaaliya oo baaritaano xoog leh ka wada xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho.